Kuraas lagu doortay Baydhaha oo Sharci-darro laga dhigay iyo Doorashada oo Dib loo qabanayo (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Kuraas lagu doortay Baydhaha oo Sharci-darro laga dhigay iyo Doorashada oo Dib loo qabanayo (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Guddiga Doorashada heer federaal ayaa laalay laba kursi oo lagu doortay magaalada Baydhaba, kana dhigay sharci darro, kadib baaritaan lagu sameeyay qaabkii doorashadu u dhacday.
Guddigad Doorashada heer Federaal ayaa gebi ahaan sharci darro ka dhigay doorashada kuraasta kala ah HOP103 oo uu horey ugu fadhiyey guddoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, isla markaana uu kusoo baxay wasiirka howlaha guud ee K/Galbeed.
Guddiga ayaa shaaciyey in kursiga HOP103 dib loo qaban doono doorashadiisa marka la dhammeystiro habraaciisa, iyadoo hore Guddiga u hakiyey doorashadiisa.
Waxaa kaloo la laalay doorashada kursigii HOP154 oo ay hore ugu fadhiday, mar kalena kusoo baxday Sareedo Maxamed Cabdalla, waxaana dib loo qabanyaa doorashada Kursiga markii la ogaaday in musharax tartanka ku jiray aanay buuxin shuruudihii laga rabay.
2. Kursiga uu tirsigiisu yahay Hop103, iyadoo la tix raacayo go’aanka guddiga ee ku xusan warqadda sumadeedu tahay (TXR/GHD/0056/21) soona baxday 27 Noofeembar 2021, go’aankaas oo lagu hakiyey in la qabto dorashadiisa, sidaas darteed, marka habraaca la dhamaystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa.
3. Waxaa jira kuraas ay muranno ka soo noqdeen oo ka soo baxay Galmudug oo hadda ay gacanta ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka, iyaga ayaana go’aankooda laga sugayaa.4. Waxaa kale oo cadaynaynaa in habraac ay soo diyaariyeen masuuliyiin ka tirsan gollaha baarlamaanka oo ka soo jeeda Soomaliland aan lagu dhaqmi karin, guddiga doorashada Soomaaliland wuxuu ku shaqaynayaa habraaca Golaha Wadatashiga Qaran, waxa keliya oo gaar u ah in ay yihiin ergo wadaag.
Previous articleGuddiga Khilaafaadka oo Muddo cusub ku darsaday Baaritaanka Kursiga la isku heysto ee HOP067
Next articleRW Rooble oo soo saaray Amarro ka kooban 9 Qodob oo ku saabsan Maamulka Doorashada (Akhriso)